Taxes are amounts of money people contribute to the costs of runningacountry or community. ဥပမာ, အခွန်ကျောင်းများအတွက်ပေးဆောင်, ဆေးရုံများ, နှင့်လမ်းများ. နိုင်ငံသားများနှင့်အစိမ်းရောင်ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူအခွန်ပေးဆောင်သည့်အခါ, they are paying their share of programs that benefit them.
တစ်ဦးကအခှနျကျနော်တို့အစိုးရများမှပေးဆောင်ပိုက်ဆံတစ်ဦးငွေပမာဏဖြစ်ပါသည်. အစိုးရများဖက်ဒရယ်အစိုးရတို့ပါဝင်သည်, ပြည်နယ်အစိုးရများက, နှင့်သေးငယ်, ခုနှင့်မြို့ကြီးများကို run ကြောင်းဒေသခံအစိုးရများ. သငျသညျငွေရှာခဲ့လျှင်, ပိုက်ဆံဖြုန်း, America မှာသို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု, သငျသညျတစျဦးမျိုးအခွန်ပေးဆောင်သို့မဟုတ်အခြားလိမ့်မယ်. နည်းမှန်လမ်းမှန်ထဲမှာအခွန်ပေးဆောင်ဖို့ဘယ်လိုနားလည်ရန်အရေးကြီးပါသည်ဒါဟာဖြစ်ပါသည်.
ဝင်ငွေခွန်သင့်ဝင်ငွေပေါ်မှာအခွန်ဖြစ်ပါသည် (သင်သည်အဘယ်သို့ဝင်ငွေသို့မဟုတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလက်ခံရရှိ). ပြည်သူ့ဖက်ဒရယ်အစိုးရနှင့်အများဆုံးပြည်နယ်အစိုးရများမှဝင်ငွေအခွန်ပေးဆောင်. (တချို့ပြည်နယ်များတွင်, ထိုကဲ့သို့သော New Hampshire နဲ့ဖလော်ရီဒါအဖြစ်, ဝင်ငွေခွန်ကောက်ခံကြပါဘူး။) ဖက်ဒရယ်ဝင်ငွေအခွန်ပြည်တွင်းအခွန်ဝန်ဆောင်မှုအားဖြင့်စုဆောင်းနေသည် (IRS ကို) နှင့်အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးသွား. ပြည်နယ်ဝင်ငွေအခွန်ဝင်ငွေဌာနများဖော်ပြသွား.
နှုန်း, သို့မဟုတ်ငွေပမာဏ, ဝင်ငွေခွန်၏သင်ဝင်ငွေမည်မျှပေါ်တွင်မူတည်သည်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သင့်ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်များမှာပေးဆောင်. ဝင်ငွေသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုပိုက်ဆံလက်ခံရရှိသူကပြည်သူ့လျော့နည်းပိုက်ဆံရသူတွေကိုထက်အခွန်ပိုမိုပေးဆောင်.
အခြားအမှုအရာတို့ကိုသင်ပေးဆောင်ဘယ်လောက်အကျိုးသက်ရောက်စေ. သငျသညျသားသမီးရှိပါက, သင်တစ်ဦးကမိသားစုပြုစုပျိုးထောင်၏ကုန်ကျစရိတ်အားဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီပေးဖို့ကြီးမားတဲ့အခွန်အကြွေးရ. တစ်ဦးကအခွန်အကြွေးသင်သည်သင်၏ဝင်ငွေလျော့နည်းအပေါ်အခွန်ပေးဆောင်ရဆိုလိုတယ်.
Getting married can affect how much tax you pay, လွန်း. လူပျိုလူဇနီးမောင်နှံထက်နိမ့်အခွန်အကြွေးရ, ဒါကြောင့်သူတို့ကပိုအခွန်ပေးဆောင်စေခြင်းငှါ. နှစ်ဦးစလုံးအလုပ်အတူတူသူတို့ကတစ်ခုတည်းသောအခါထက်ပိုပြီးအခွန်ပေးဆောင်စေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်သို့သော်အိမ်ထောင်သည်.
ကျွန်မအခွန်ပြန်လာဘယ်လို file ပါဘူး?
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း, အလုပ်သမားများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုရှေ့တော်၌ထိုနှစ်တွင်အဘို့မိမိတို့ဝင်ငွေတွက်ချက်ရန်ရှိသည်. ထိုအခါသူတို့ကသူတို့အကြွေးမည်မျှအခွန်ထွက်တွက်ဆနှင့်အစိုးရမှ၎င်းတို့၏ကိန်းဂဏန်းများပေးပို့. ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ် “filingatax return.” လူအတော်များများပြီးသားသူတို့အခွန်ပြန်လာ file အချိန်မှာသူတို့ရဲ့အခွန်ပေးဆောင်ခဲ့ကြ. သူတို့ပေးဆောင်ရမတိုင်မီအခွန်အနေနဲ့ငွေပမာဏဟာသူတို့ရဲ့ပုံမှန်လစာမှခေါ်ဆောင်သွားသည်ကို ထောက်. ဤသူကားအ. တခါတလေ, သင်၏အခွန်ပြန်လာသင်ပြီးသားလွန်းအခွန်ပေးဆောင်င့်ပြသခွေငျးငှါ, နှင့်အစိုးရသင်တစ်ဦးပြန်အမ်းငွေကြွေးတင်နေသည်!
အရေးကြီးမှတ်ချက်: You must tell the truth on your tax return. If you are notaUS citizen, this is particularly important, because mistakes on your taxes return can get you deported. If you arealegal permanent resident (green card holder), make sure you declare all your income. အဆိုပါ Read USCIS information about taxation of resident aliens.
ကျွန်မအခွန်ပြန်လာ file ဖို့လိုအပ်ပါနဲ့?
သငျသညျအခှနျကြွေးသို့မဟုတ်အစိုးရကသင်ပေးဆပ်ရန်ရှိမရှိ, it is your responsibility to know when and how to pay taxes. You must send your tax return for the previous year to the government before April 15 every year. သင့်အနေဖြင့်အစိုးရပုံနှိပ်ပုံစံပေါ်တွင်သင်၏အခွန်ပြန်ပို့ပေးပါလိမ့်မယ်. အဆိုပါပုံစံများကိုအလွန်ရှည်လျားဖြစ်ကြောင်းနှင့်သင့်ဝင်ငွေနှင့်အသုံးစရိတ်အကြောင်းအသေးစိတ်စာရေးတောင်း.
If you earn income in the United States, the law says you should pay taxes. You can pay taxes withoutasocial security number. You can use an Individual Taxpayer Identification Number (ITIN). The Internal Revenue Service will give you an ITIN if you are not eligible forasocial security number (SSN). ဘယ်လိုထွက်ရှာမည် apply for or renew an ITIN in English သို့မဟုတ် apply for or renew an ITIN in Spanish.
If you earn income in the United States, the law says you should pay taxes even if you are notalegal resident. You use use an ITIN to pay taxes. Paying taxes when you are undocumented can help to show you have “good moral character.” Showing good moral character is important if you apply foracancellation of removal and green card in the future. သို့သော်, USAHello advises that you talk to an immigration professional before you apply for an ITIN. သင်လုပ်နိုင်သည် find free and affordable legal services သင့်ရဲ့ဧရိယာထဲမှာ.
သငျသညျအခှနျပေးချေဖို့ဘယ်လိုနားလည်သဘောပေါက်ခဲအချိန်ရှိခြင်းနေတယ်ဆိုရင်, စိတ်မပူပါနဲ့. သငျသညျအကူညီရနိုင်. အတော်များများကအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးအဖွဲ့အစည်းများကူညီမှုပူဇော်. သင်တစ်ဦးမကြာသေးခင်ကပြန်လည်နေရာချထားဒုက္ခသည်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သင့်ရဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးရုံးမှာအကူအညီတောငျး.
သငျသညျဒုက္ခသည်တစ်ဦးမဟုတ်ရင်တောင်, အစိုးရကလိုအပ်သူတွေကိုကူညီဖို့ program တစ်ခုရှိပါတယ်. အဆိုပါ စေတနာ့ဝန်ထမ်းဝင်ငွေခွန်ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး (Vita) အစီအစဉ် offers free tax help to people who earn $54,000 တစ်နှစ်ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်း, မသန်စွမ်းလူဦး, နှင့်ကန့်သတ်အင်္ဂလိပ်နှင့်အတူလူများတို့အား. You can quickly find the nearest help by using the VITA locator. အတော်များများသောအရပ်တို့ကိုစပိန်အတွက်အကူအညီပူဇော်, အဘိဓါန် Arabic, တရုတ်နှင့်အခြားဘာသာစကားများ.
သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အခွန်ပြန်လာ file လိုပါက, သငျသညျကိုသုံးနိုင်သည်အများအပြားအစီအစဉ်များရှိပါတယ်, အသုံးအများဆုံးတဦးတည်းအပါအဝင်, turbo အခွန်. သင်တို့မူကား Turbo အခွန်များအတွက်ပေးဆောင်ဖို့ရှိသည်ပါဘူး.
သင်တို့သည်လည်းဖြောင့်ဖို့သွားနိုင်ပါတယ် IRS ကို Freefile က်ဘ်ဆိုက် ထိုအရပ်၌ထိုလုပ်ငန်းစဉ်စတင်ရန်.